Kooxda Bloomwell waxay heshaa maalgelinta abuurka ugu weyn abid suuqa xashiishadda Yurub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kooxda Bloomwell waxay heshaa maalgelinta abuurka ugu weyn abid suuqa xashiishadda Yurub
Kooxda Bloomwell waxay si guul leh u xirtay wareejin maalgelin abuur ah oo ka badan $ 10 milyan oo doollar - oo ah maalgashigii abuurka ugu badnaa ee si guud loo yaqaan shirkad xashiishad Yurub ah ilaa maanta. Maalgashadaha hormuudka ah waa bixiyaha raasumaalka kobaca Mareykanka Measure 8 Venture Partners, oo ku takhasusay maalgashiga warshadaha xashiishadda. Maalgashadayaasha kale, malaa'igta ganacsiga Dr. Reinhard Meier ayaa mar kale maal -gelineysa sanduuqa Maal -gashadeyaasha Capital Venture; iyo Mr. Weber oo ka tirsan FPS wuxuu u ahaa lataliyaha sharciga Bloomwell.
Kooxda Bloomwell waxay si guul leh u xirtay wareegga maalgelinta abuurka oo ka badan $ 10 milyan oo doollar-maalgashiga abuurka ugu sarreeya ee si guud loogu yaqaan shirkad xashiishad reer Yurub ah ilaa maanta. Maalgashadaha hormuudka ah waa bixiyaha raasumaalka kobaca Mareykanka Measure 8 Venture Partners, oo ku takhasusay maalgashiga warshadaha xashiishadda. Maalgashadayaasha kale, malaa'igta ganacsiga Dr. Reinhard Meier ayaa mar kale maal -gelinaysa sanduuqiisa Maalgashadayaasha Capital Venture; iyo Mr. Weber oo ka tirsan FPS wuxuu u ahaa lataliyaha sharciga Bloomwell.
Iyada oo la socota ogeysiiska, Kooxda Bloomwell, oo ay kujirto Algea Care, oo ah hormuudka telemedicine -ka ugu horreeya Yurub ee xashiishadda caafimaadka marka loo eego tirooyinka bukaanka, ayaa isu beddelaysa sidii shirkad haysata, taas oo u oggolaanaysa inay dhisto, maalgeliso ama hesho shirkado xashiishad ah.
“Iyada oo leh Bloomwell, waxaan ku beddeleynaa daryeelka caafimaadka iyada oo loo marayo digitalization -ka iyo suurtagalnimada xashiishadda caafimaadka iyo sidoo kale dawooyinka kale ee dabiiciga ah. Shirkadahayaga faylalka tacliimeed waxay si xoog leh diiradda u saari doonaan habka macmiilku u yahay dhammaan silsiladda qiimaha xashiishadda caafimaadka, marka laga reebo beerista. Xilligii dawada ku saleysan dabiiciga ayaa hadda bilaabmaysa Bloomwell ayaana hoggaanka qabanaysa, ”ayuu yiri Niklas Kouparanis, Maamulaha & Aasaasaha Kooxda Bloomwell.
Muddo sannad gudaheed ah, Kooxda Bloomwell waxay ku korodhay 160 shaqaale, iyada oo la saadaalinayo dakhli dhan shan milyan oo euro sannadka 2021. Waxaa intaa dheer Niklas Kouparanis, oo ah maamulaha guud, ganacsadaha iyo hormuudka xashiishadda, guddiga waxaa xoojiya halyeeyga telemedicine Dr. Reinhard Meier, oo asaas u ah wuxuu Teleclinic u horseeday bixitaan, Iskuduwaha Samuel Menghistu iyo Boris Jordan, oo ah aasaasaha lamaanaha Measure 8 Venture Partners.
Guddiga la dhammaystiray wuxuu daboolayaa wajiyada daawada, digitalization -ka, xashiishadda, maalgashiga iyo dhisidda summada dhammaan qaybaha kala duwan ee suuqa.
Dr. Reinhard Meier, Agaasimaha Radiology -ga Westpfalz Klinikum, oo hore loo asaasay loona maalgeliyey dhowr shirkadood oo caafimaad iyo sidoo kale bilaabista dhawr maaliyadeed oo VC ah.
Boris Jordan, Iyada oo la iibsaday $ 285M ee EMMAC, Curaleaf waa MSO -da ugu horreeya oo keliya ee joogitaan macno leh ku leh Yurub. Jordan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah khubarada canab ee ugu caansan Waqooyiga Ameerika waxayna mas'uul ka ahayd hawlgallada Curaleaf, oo ah shirkad xashiishad oo dadweyne ka ganacsata oo caalami ah, iyo sidoo kale maalgashiyada xashiishadda iyada oo loo marayo Measure 8 Ventures.
Niklas Kouparanis, ganacsade taxane ah, iyo hormuud ka ah warshadaha xashiishadda caafimaad ee Euopean.
Samuel Menghistu, hormuudka ka ahaa isgoyska bangiyada, maalgashiga, M&A Transactions iyo IPOs muddo ka badan lix sano.
Qaar badan oo ka mid ah filashooyinka sare ee maalgashadayaasha iyo shirkadaha caalamiga ah ee ku jira warshadaha xashiishadda Yurub weli lama fulin tan iyo markii la sameeyay 'Sharciga Xashiishadda' bishii Maarso 2017, in kasta oo suuqa uu si joogto ah u korayay. Iyada oo leh Bloomwell, waxaan ku tusnay hal sano gudaheed inta lagu gaari karo ganaax ganacsi. Warshadaha xashiishadda Yurub ee curdinka ah ayaa ka buuxa karti mustaqbalka Bloomwell. In kasta oo suuqyadu meel kale ku sii xoojinayaan, dhammaan calaamadaha ayaa tilmaamaya xagga kobaca iyo ballaarinta iyada oo la isku darayo xashiishadda, hal-abuurka, digitalization-ka iyo D2C xag-jir ah ama qaab-bukaan-socod toos ah, ”ayay tiri Anna-Sophia Kouparanis, Isuduwaha Kooxda Bloomwell.
“Jarmalku waa suuqa ugu horreeya Yurub ee xashiishadda caafimaadka, kooxda Bloomwell waxay caddeysay hal sano gudaheed inay aqoonsan karto oo cabbiri karto xalalka hal -abuurka ah ee suuqan kobaca cusub ee faa'iidada bukaannada. Cannabis waxay mustaqbal ifaya ku leedahay Yurub waxaanan rajaynaynaa inaan taageerno oo aan la shaqayno Kooxda Bloomwell marka ay sii wadaan cabbirka, ”ayuu yidhi Boris Jordan, oo ah Shuraakada Aasaasiga ah ee Measure 8 Venture Partners iyo Guddoomiyaha Fulinta Curaleaf.
“Digitalization -ka ayaa fure u ah in ugu dambayn bukaannada la dhigo xarunta nidaam daryeel oo aan tayo lahayn. Algea Care, oo ah shirkad wax-soo-saar leh oo Bloomwell ah, ayaa durbadiiba caddeysay inay leedahay khibrad iyo karti ay ku hagaajiso fayoobaanta iyo nolol-maalmeedka kumanaan bukaan ah oo ku jira qayb aad loo nidaamiyay iyada oo loo marayo xashiishadda caafimaadka iyo digitalization-ka iyo sidoo kale heer adeeg aad u sarreeya , ”Ayuu yiri Dr. Reinhard Meier.